गाडीको कर्जामा सीमा तोक्दै राष्ट्र बैंक, बढ्ला कि घट्ला ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > गाडीको कर्जामा सीमा तोक्दै राष्ट्र बैंक, बढ्ला कि घट्ला ?
गाडीको कर्जामा सीमा तोक्दै राष्ट्र बैंक, बढ्ला कि घट्ला ?
काठमाण्डौं । राष्ट्र बैंकले अस्वभाविक रुपमा साना सवारी साधनमा कर्जा गएको भन्दै गाडी कर्जामा सीमा तोक्ने संकेत गरेको छ।गभर्नर डा। चिरञ्जिवी नेपालले बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह, विकास बैंक संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने, फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरलगायतसँग छलफलको क्रममा सीमा तोक्ने संकेत गरे।
गाडी कर्जामा पनि ुलोन टु भ्यालुु अनुपात तोकिने उनले जानकारी दिए। अहिलेसम्म कुल लगानीको यति प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाइन्छ भनेर घरजग्गाररियलस्टेट र शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको छ।
गाडीमा अत्याधिक लगानी भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमा तोक्ने भएको हो। ुबैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गरेको पाइयोु गभर्नरले भने, ुयसमा सीमा तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ।ुपछिल्लो समयमा साना सवारी साधनको अस्वभाविक आयात बढेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको साना सवारी साधन भित्रिएको छ। यो अवधिमा १३ हजार पाँचसय ४७ वटा कार, जिप र भ्यानहरु आयात भएका छन्। यो गत वर्षभरीको भन्दा बढी हो।बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सवारी साधन कर्जा साढे ६ प्रतिशतमा दिने गरेका थिए।कर्जा सस्तो भएका कारण साना सवारी साधन किन्ने बढेका थिए।
गत वर्षभरी १२ हजार ३ सय ३२ वटा साना सवारी आयात भएको थियो। कार,जीप र भ्यान साना सवारी साधनमा पर्छ। राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जा अस्वभाविक रुपमा बढेको भन्दै शोधानान्तर घाटामा जानसक्ने अर्थमन्त्रालयलार्इ जानकारी दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको तथ्यांकमा समेत गाडी कर्जा बढी रहेको भन्दै लगानीमा सचेतता अपनाउन सुझाब दिएको थियो।
२७ माघ २०७३, बिजमाण्डु, ११।००
२०७३ माघ २७ गते ११:१५ मा प्रकाशित
टेलिकमले कमायो ६ महिनामा आठ अर्ब खुद नाफा
इन्स्यारेन्सको एफपिओ किन्नुभो ? पाउँदै हुनुहुन्छ ३० प्रतिशत बोनस
मेगा बैंक र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो हत्याकाण्ड, एकै व्यक्तिले लिएर १९को ज्यान !
बीमा समितिको बाध्यात्मक व्यवस्थाले चुक्ता पुँजी बढाउँदै बीमा कम्पनीहरु
द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२ को टाइटल स्पोन्सरमा युनाइटेड सिमेन्ट्स अनुबन्ध